Waxaan dhamaanteen ku raaxaystaan ​​daawashada cajaladaha maxaa yeelay waxay bixiyaan nasashada waxayna naga caawiyaan inaan unwind iyo sii daayo oo dhan walwalka maalintii. Oo eego horumarka tiknoolijiyada dambeeyay ayaa noo saamaxaysa inaan daawado video isla tiro ka mid ah qalabka, hadba ku haboon waqti la siiyo. Laakiin mararka qaarkood aad la kulmi kartid arrin marka video ah in ay saaxiib ama diri laakiinse iyagu ma laga yaabaa in ay u soo daawadaan karo sababta oo ah iyaga oo aan haysan tago software ama fur oo taageera qaabka video ah. Tani waxay u muuqan yaabaa in sida caqabad dhab ah, laakiin ay la video Converter waa sida fudud ee suurtogalka ah. Waxaad si fudud u beddeli karaa qaabka video ka galay wax ka badan oo caalami ah in la daawan karo oo ay qof walba la isticmaalayo Converter video ah. Waxa kale oo aad ka daawan kartaa videos ee iPad ama iPhone la beddelo qaab faylka la isticmaalayo Converter video ah.
Qeybta 1: Dib u eegidda Good
Qeybta 2: Dib u eegidda xun
Qeybta 3: 5 Top Video Converter lagu bedelan karo
CNET ka hadlayaa Converter kasta Video sida isagoo mid ka mid ah ugu wanaagsan video converters si loogu badalo si file kasta oo aad jeclaan lahayd.
2. Top Toban Reviews
Goobta waxa ay si cad in ay tahay mid ka mid ah ugu wanaagsan video converters si loogu badalo YouTube videos si fudud.
Softonic dhigayaa in awoodda ay si loogu badalo wax video si fudud. Awoodda loo leeyahay in la gooyaa oo xanjo URL ee waa mid ka mid ah u fududahay.
4. Technology Guide
Guide Technology sheegayaa in software si fudud nuqul ka kartaa DVD ee si kale DVD iyo waa in loogu badalo run ahaantii si fudud u awoodaan. Best, waxa uu xitaa u bedeli karaan videos ka goobaha caanka ah sida YouTube iyo Netflix.
5. Mac Review
Mac Review sheegayaa sida software waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican marka ay timaado muuqaalada iyo waxay bixisaa wax soo saarka oo tayo fiican leh.
Top 5 User dib u eegista
User waxa uu dhigayaa in uu dhib kuma qabin isticmaalaya software ah oo dhan, taas oo ka dhigaysa software ah fududahay in la isticmaalo.
User ayaa sheegayaa in la isticmaalayo software waa effortless iyo bixiyaa mid ka mid ah waayo-aragnimo user ugu fiican.
User ayaa sheegayaa in la software ka shaqeeya waa u fududahay oo ay u shaqayso si lama filaan ah oo wanaagsan, isagoo si loogu badalo videos si fudud u awoodaan.
User ayaa sheegayaa in software waa doorasho weyn sida wax soo saarka ah oo lacag la'aan ah oo uu leeyahay tiro badan oo ah qaababka ay u isticmaalaan.
5. Kooxda Gogo
User ayaa sheegay in software waa doorasho weyn video diinta ka xor ah oo ka mid tahay in ay isku dayaan baxay.
Dhammaan kor ku URL ee - http://download.cnet.com/Any-Video-Converter/3000-2194_4-10661456.html
1. Top Toban Reviews
Inkastoo goobta leedahay qaar ka mid ah erayada wanaagsan oo ku saabsan kasta Video, waxaa kama xishoodo ka xaqiiqda ah in software aan u bedeli karaan files audio mana dari watermark in videos.
Software ma taageeraan oo dhan qaabab diinta, con a ugu weyn ee wax soo saarka, sida uu Softonic.
3. Technology Guide
Guide Technology sheegayaa sida DVD koobiyeynta kaliya noqdo madax xanuun la software ah, oo wuxuu noqon karaa run ahaantii dheer.
4. Mac Review
Mac Review sheegayaa in software uusan haysan interface sahlan, oo waxay yeelan karaan a qalooca waxbarashada hore oo wanaagsan.
Xaqiiqda ah in aad leedahay si aad u iibsato version kama dambaysta ah ka dib markii diinta files waa irksome, sida ay About.
Dib u eegista User
User waxa uu leeyahay qaad kala duwan ee software-ka u sheegay in ay uninstalling suurto iyo software-ka kaliya aan suurto gal ka shaqeeya.
User ayaa sheegayaa in kasta Video uusan haysan taageero kasta oo ay lahaayeen in ay sugto todobaad si aad u hesho arrin fudud xalin.
User PaleskinMusic sheegayaa in software-ka waa bilaash oo kaliya in la isku dayo oo aan lacag la'aan ah, sida dhab ahaan loo xayaysiiyo.
User ayaa Beeniyay software ah, isagoo u sheegay waxa ay gabi ahaanba waa buggy oo diiday in ay ka shaqeeyaan nidaamka.
User ayaa sheegayaa dhibaato halis ah in software diido in la Windows 8 shaqeeyaan, wax ma uu garanaynin wuxuu ku saabsan ka hor.
Developer- Wondershare rasmiga Website
Download URL- http://www.wondershare.com/pro/free-video-converter.html
Waa sahal in la badalo files audio iyo video waaweyn
Free video Converter taasoo si fudud u ciyaari karo files kala duwan
La jaan qaada qalabka oo dhan si aad u isticmaali kartaa oo kaliya OS aad in Android ama Mac la si fudud
Tayada Great iyo xawaaraha diinta ka weyn taas oo macneheedu yahay in aad u bedeli karaan videos in jiffy ah.
Fursadaha tafatirka balaaran, laga yaabee ugu fiican ee ku wareegsan ee converters
Fursado badan format.
Taageerayaan formats- Converts video iyo maqal ah in dhammaan video & audio qaabab (3D ka mid ah)
2. Aimersoft Video Converter 6
Download URL- aimersoft-video-converter.en.softonic.com
Tayada audio Good oo aad dooran kartaa Deji audio
Waxaa aad u ogolaanaya in ay Dufcaddii-diinta, Dufcaddii-beddelid badan nooca file si aad si fudud u bedeli karaan
Kuu ogolaanaya in aad leedahay si buuxda uga taliso videos
Kuu ogolaanaya in aad xaalkaa videos
Wuxuu ka caawiyaa in xulashada qaabab kala duwan u faylasha aad
Input files- AVI, MP4, FLV, wmv, mod, MPEG, MOV, VOB, iyo qaar badan oo
Output files- wadar ahaan 15 qaabab file ka mid yihiin AVI, MP4, FLV, MP3 iyo noocyada kale file yaryahay
3. Moravi video Converter
Download URL- en.softonic.com> Video software> converters
Easy in ay isticmaalaan oo ay leedahay interface nidaamsan
Kuweeda oo dhan qaabab file
Taageerayaan formats- wmv, MOV, MP4 iyo VOB, Xvid iyo DivX
Wuxuu ka caawiyaa videos edit
Video sidoo kale fursad u jooga
Kartida aad u aragto videos in gallery ah
Fursada aad xaalkaa kala duwan videos isku mar.
URL Download: total-video-converter.en.softonic.com/
Interface user Good iyo qalooca waxbarasho fudud
Kartida in ay doortaan qaab sida ay qalab video ah
Fursado badan format
Easy cabbirka sida aad u yarayn karaa size video si weyn
Eebaha u arkaysid in qalabka la qaadi karo
Kuweeda videos ka dhowaad nooca file kasta
Taageerayaan formats- Total Video Converter badasha dhow wax walba, oo ay ku jiraan wmv (Windows Media), AVI, MOV (QuickTime), dhexena (RealMedia), VOB (DVD) iyo soo bixi FLV (Flash / YouTube) files.
5. Leawo Video Converter Pro 6.2
Developer- Leawo Software
URL Download: leawo-video-converter.en.softonic.com/
Kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo movie kasta si 3D
La socon kara noocyo kala duwan oo ah noocyo
Taageerada luqadood oo kala duwan marka laga reebo English
Kartida aad u wada xaalkaa kala duwan videos
Qaabab file video kala duwan uu ka soo xusho
Video codec iyo fursadaha codec audio heli karo.
Taageerayaan formats- AVI, MP4, DAT, WEBM, RMVB, dhexena, Mpg, MPEG, VOB, MOV, M4V, QT, FLV, F4V, NSV, lowska, MKV iyo in ka badan.
Kasta Video Converter noqon kartaa doorasho wanaagsan, laakiin waxaad hubaal ka eegi kartaa kale oo ka wanaagsan sida Wondershare. Waxay u fiican yihiin iyo waxay kaa caawin karaan in aad wax badan ka sii leh baahida diinta video aad samayn.
TOP 10 KARSANIN CD Best
Top 10 Free Goobaha si aad u hesho SMS Online adiga oo aan Lambarka Telefoonka Real
Top 10 SMS jadwaliye inuu kaa caawiyo inaad fariin qoraal ah Later dir
Top 50 YouTube converters in mp3
> Resource > Top List > kasta oo dib u eegidda Video Converter oo lagu bedelan karo